Faafida EBT - Wada-hawlgalayaasha Oregon-gaajo-la'aanta
Faafida EBT (P-EBT) waxay siisaa qoysaska taageero dhaqaale si ay u daboosho kharashka cuntada dugsiga inta lagu jiro xidhitaanka dugsiga, saacadaha la dhimay iyo imaanshaha ama waxbarashada fog. Dheeftan waxaa la siiyaa DHAMMAAN qoysaska ay carruurtoodu helaan cunto bilaash ah iyo qiimo jaban oo dugsi oo ku yaal Oregon ama tag dugsi cunto bilaash ah siiya dhammaan ardayda inta lagu jiro hawlaha caadiga ah ee dugsiga. Macluumaad dheeraad ah ayaa laga heli karaa hoos English, Español, Carabi, русский, Shiinaha oo La Fududeeyay, somali, Shiineys dhaqameed, Iyo SomGoal rss
Oregon waxaa loo ogolaaday inay bixiso faa'iidooyinka EBT ee Faafa sannad dugsiyeedka 2020-2021. Faa'iidooyin badan ayaa sidoo kale la bixin karaa xagaaga 2021 si loo daboolo cuntada marka carruurtu ka maqan yihiin dugsiga xagaaga - faahfaahin dheeraad ah ayaa iman doonta.
P-EBT Su'aalaha Inta Badan La Isweydiiyo
Ma hayso su'aalo ku saabsan dheefahaaga P-EBT iyo goorta aad heli doonto? Hoos ka hel jawaabaha
Qoys kasta oo leh carruur, haddii aysan ahayn xiritaanka dugsiga ama waxbarashada fog inta lagu jiro faafitaanka COVID-19, waxay heli doonaan cunto bilaash ah oo qiimo jaban xagga dugsigooda.
Faa'iidooyinka waxaa la siin doonaa qoysaska leh carruurta ka diiwaangashan dugsiga K-12, dugsi-horaadka ku salaysan, ama Head Start ku salaysan ee sida caadiga ah ka qaybqaata barnaamijka qadada dugsiga qaranka.
Wareega cusub ee P-EBT, carruurta 0-5 jir ah ee qaata SNAP waxay sidoo kale heli doonaan faa'iidooyinka P-EBT. Carruurta da'doodu tahay 6 sano ee qaata SNAP ee aan weli is-diiwaangelinin sidoo kale waa u bannaan yihiin laakiin qoysasku waxay u baahan doonaan inay ogeysiiyaan Waaxda Adeegyada Dadweynaha in ilmahoodu ka diiwaangashan yahay xannaanada carruurta.
Qoysasku waxay heli karaan labadaba EBT-da Faafa iyo cuntooyinka la diyaariyay ee “qabso oo tag” ee dugsiyadu bixiyaan inta lagu jiro aafada.
Xaaladda socdaalka dhib kuma aha Faafida EBT. Faafida EBT laguma xisaabin doono imtixaan dadweyne.
Waa imisa faa'iido?
Faa'iidooyinka waxaa la soo saari doonaa iyadoo lagu salaynayo heerka dugsiyadu (si buuxda u fogaanayaan, isku-dhafan, ama qof ahaan si buuxda) inta lagu jiro bisha la bixiyay degmada dugsi ee ilmaha. Faa'iidooyinka bil kasta waa:
Dheefaha buuxa = $136 bishii ilmo kasta
Dheefaha buuxa waxa la bixiyaa marka ardayda badidoodu ay ugu horrayn aadaan dugsiga gabi ahaanba ama haddii dugsigu gebi ahaanba xidhan yahay
Faa'iidooyinka qayb ahaan = $75 bishii ilmo kasta
Faa'iidooyinka qayb ahaan waxaa la bixiyaa marka ardaydu ku jiraan waxbarashada isku-dhafka ah.
Wax faa'iidooyin ah lama bixin doono haddii ardaydu ay ku jiraan dugsi ugu horrayn u shaqaynaya si shaqsi ah.
Fadlan ogow dheefaha way kala duwan yihiin bishiiba. Tusaale ahaan haddii ardaygu si buuxda u fogaanayo Oktoobar 2020 illaa Maarso 2021, waxbarashada isku-dhafka ah ee Maarso 2021 illaa Abriil 2021, iyo si buuxda shakhsi ahaan May 2021, qoyskaas wuxuu heli doonaa isku darka faa'iidada buuxda, faa'iidada qayb, iyo wax faa'iido ah. bil kasta oo u dhiganta.
Goorma ayay qoysasku heli doonaan dheefaha?
Faa'iidooyinka waxaa loo qaybin doonaa si tartiib tartiib ah si loo daboolo cuntada dugsiga laga bilaabo Oktoobar 2021 ilaa Maajo 2021 waxaana la kala diri doonaa laga bilaabo dhammaadka Luulyo 2021 illaa Sebtembar 2021. Faa'iidooyinka dib-u-noqoshada ee dhowr bilood ayaa la bixin doonaa hal mar iyada oo qaybinta qorshaysan ay dhici doonto Julaay, Ogosto, iyo Sebtembar 2021. Faa'iidooyinkan ayaa diyaar kuu ah inaad isticmaasho sannad dhan.
Sidee ayuu u shaqeynayaa?
Faa'iidooyinka waxaa lagu bixiyaa kaarka EBT ilmaha helaya dheefahaas. Waxay u shaqeysaa sida kaadhka deynta si aad u iibsato raashin.
Qoysas badan ayaa si toos ah u heli doona Faafida EBT.
Haddii qoyskaagu helo SNAP, faa'iidooyinka EBT ee Faafa waxa lagu dari doonaa kaarka EBT ee aad hore ugu isticmaali jirtay SNAP.
Haddii qoyskaagu uu hore u helay EBT Faafida, habka sanadkan wax yar ayuu ka duwanaan doonaa. Ilmo kasta oo guriga ku nool ayaa si toos ah loogu siin doonaa kaalmooyin kaarkooda - sidaas darteed qoysas badan ayaa heli doona kaararka gargaarka cusub sanadkan. Kuwa weli haysta kaarkii ay heleen dheefaha PEBT sanadkii hore, faa'iidooyinka waxaa lagu siin doonaa kaarkan ilmaha ugu weyn guriga iyo kaararka cusub waxaa la siin doonaa faa'iidooyinka carruurta kale.
Kaarka manfaca waxaa lagu soo diri doonaa ciwaankii ugu dambeeyay ee faylka loogu talagalay dugsiga ubadka. Haddii ciwaanka qoysku is beddeleen, fadlan la xidhiidh dugsiga degmada ilmaha marka la gaadho Juulay 20-keeda.
Haddii aadan haysan kaarkii hore ee EBT ee Faafa, waxaad heli kartaa mid cusub adiga oo wacaya khadka beddelka ee Kaarka Trail Card ee Oregon, 1-855-328-6715 ama iimayl ku soo dir [emailka waa la ilaaliyay].
Haddii qoyskaagu aanu helin faa'iidooyinka EBT ee faafa sannadkii hore, laakiin laga yaabo inay dhawaan u qalmaan cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban ee dugsiga sababtoo ah isbeddelka dakhligaaga, fadlan buuxi codsiga cuntada bilaashka ah iyo qiimaha jaban ee Juun 20-keeda: https://www.ode.state.or.us/apps/frlapp
Kaarka manfaca waxaa lagu soo diri doonaa ciwaankii ugu dambeeyay ee faylka loogu talagalay dugsiga ubadka. Haddii ciwaanka qoysku is beddeleen, fadlan la xidhiidh dugsiga degmada ee ilmaha.
Waxaa si toos ah laguugu siin doonaa faa'iidooyinka EBT ee Faafa laga bilaabo Oktoobar 2020 ilaa Maajo 2021 marka laguu ogolaado midkood cunto dugsiyeed bilaash ah ama SNAP.
Ma haysaa su'aalo dheeraad ah oo aan halkan looga jawaabin?
Su'aalo dheeraad ah oo ku saabsan EBT-da Faafa, hubi dukumeentiga Q+A.
Ma qabtaa su'aalo ku saabsan dheefahaaga P-EBT?
Ku xidh khadka taleefoonka ee P-EBT 503-945-6481 ama iimayl [emailka waa la ilaaliyay] Khadka taleefoonka waxaa ka shaqeeya 211 waxayna ku bixin karaan kaalmo luqado badan. Khadka telefoonka iyo iimaylka ayaa furmi doona laga bilaabo Luulyo 1-deeda.
Wixii macluumaad dheeraad ah booqo: https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/p-ebt.aspx
Qalabka PHFO P-EBT
Hoos waxa ah agab leh wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato Faafida EBT ee Oregon.
DHAMMAAN LUQADAHA (Ingiriis, Español,Tiếng Việt, Soomaali, русский, Trad. Shiinees, Shiine la Fududeeyay, Carabi)
Tusaalaha WARQADA QOYSKA
Shiinaha oo La Fududeeyay
Tusaalaha WARBAAHINTA BULSHADA IYO FARIINTA QORAALKA
DHAMMAAN AALADAHA - LA SIINAY
Wixii macluumaad dheeraad ah, booqo
Waaxda Adeegyada Aadanaha ee Oregon P-EBT boggeeda:https://www.oregon.gov/dhs/assistance/food-benefits/pages/p-ebt.aspxWaaxda Waxbarashada ee Oregon COVID-19 bogga ilaha ilaha:https://www.oregon.gov/ode/students-and-family/childnutrition/Pages/COVID-19.aspx
Ma rabtaa macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan COVID?
Waxaan diyaarinay agab si aan kaaga caawino inaad cuntada miiska saarto inta lagu jiro aafo.